ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေအတွက် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုရဲမင်း (ACC) - Myitter
ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေအတွက် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုရဲမင်း (ACC)
September 3, 2019 Myitter ပြည်တွင်းသတင်း 0
ပရိသတ်ကြီးရေ၊ မကြာသေးခင်က ဝင်းနဲ့ ဇော် လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ACC က ကိုရဲမင်းက အဖြစ်မှန်ကို အခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
29-8-2019 ရက်နေ့က အမိန့်ချတယ် ဒီနေ့ပဲ ဘုရင်မင်းမြတ်က သေဒဏ်အမိန့်ကိုသနားညှာတာစွာနဲ့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလောက်ထိမမြန်ပါဘူး။
ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးထံကို အသနားခံစာတင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့် (သို့) နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘုရင့်ရှေ့မှောက်သို့ အခစားဝင်ပြီး တရားဝင်အသနားခံစာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သာမာန်ရုံးကိစ္စရပ်တွေတောင် အဆင့်ဆင့်တင်ပြကြရတာမို့ ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးထံ အခစားဝင်ဖို့ကတော့ အဆင့်ဆင့်ခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းရမှာပါ။ သို့ပေမယ့် လွယ်ကူမည်မထင်ပါ။
အမှန်တကယ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရင်တောင် ဒီအချိန် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးချက်ချင်း သတင်းပြန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင့်နန်းတွင်းက တရားဝင်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနက စာထွက်လာမှာဖြစ်သလို ထိုင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးက ဒီသတင်းကို အရင်ဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဝင်းနဲ့ ဇော်အတွက် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်က ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီး အပေါ်မှာ မူတည်နေပါပြီ၊ သည့်အတွက် ဒေါသတွေရှေ့မထားကြဖို့၊ ဆန္ဒပြတာတွေမလုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အဆင့်က ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေကတော့ ဆုတောင်းပေးယုံပဲတတ်နိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကျမ္မာပါစေ ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြဖို့လိုပါတယ်။
ကျနော်တုို့ သတိထားရမှာက၊ ထုိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၄)သန်းနီးပါး ရှိတယ်ဆုိုတာရယ် အရေးကြီးတာက သာမန်ထုိုင်းပြည်သူအများစုဟာလည်း လိပ်ကျွန်းလူသတ်မူ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတုို့ ကုိုယ်တုိုင်မကျေနပ်ကြပါဘူး။
ထုိုင်းလူမျိူးတွေရဲ့ထောက်ခံမူ့ (မေတ္တာ) နဲ့ ထုိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့ သနားကျင်နာလိုစိတ်၊ (မေတ္တာ) ကို ရဖုို့သာနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေကို ကျွန်တော်အထူးမှာကြားချင်တာကတော့ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီး ထိုင်းနိင်ငံကို စော်ကားတဲ့ အရေးအသားတွေ ဆဲဆိုတာတွေထိုင်းဘုရင့်မျိုးနွယ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ထိပါးရေးသားတာတွေကို လုံးဝ မပြုလုပ်ကြဖို့အထူးသတိပေးချင်ပါတယ်။
မိမိက ထိုင်းနိင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်းဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာပြီး လုံခြုံဘေးကင်းစွာနဲ့ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ထံကို ဖုန်းဆက်မေး CB ကမေးနေကြသူတွေ ကျေနပ်နိင်ကြပါစေ။
ရဲမင်း(AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ ) ထိုင်းမြန်မာ အခြေစိုက် ” ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း သတင်းအမှန်ကို ချင့်ချိန်ယုံနိုင်ကြပါစေ
Source ; Ye Min
ဝငျးနဲ့ ဇျော လှတျမွောကျပွီဆိုတဲ့ သတငျးတှအေတှကျ ဖွရှေငျးလိုကျတဲ့ ကိုရဲမငျး (ACC)
ပရိသတျကွီးရေ၊ မကွာသေးခငျက ဝငျးနဲ့ ဇျော လှတျမွောကျပွီဆိုတဲ့ သတငျးတဈခု ထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါသတငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ထိုငျးနိုငျငံအခွစေိုကျ ACC က ကိုရဲမငျးက အဖွဈမှနျကို အခုလိုပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
29-8-2019 ရကျနကေ့ အမိနျ့ခတြယျ ဒီနပေဲ့ ဘုရငျမငျးမွတျက သဒေဏျအမိနျ့ကိုသနားညှာတာစှာနဲ့ လှတျငွိမျးခှငျ့ပေးတယျဆိုတဲ့ သတငျးဟာမဟုတျပါဘူး။ အဲ့ဒီလောကျထိမမွနျပါဘူး။
ဘုရငျမငျးမွတျကွီးထံကို အသနားခံစာတငျမယျဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံက သမ်မတကွီး ဦးဝငျးမွငျ့ (သို့) နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမှ ဘုရငျ့ရှမှေ့ောကျသို့ အခစားဝငျပွီး တရားဝငျအသနားခံစာတငျရမှာဖွဈပါတယျ။
သာမာနျရုံးကိစ်စရပျတှတေောငျ အဆငျ့ဆငျ့တငျပွကွရတာမို့ ဘုရငျမငျးမွတျကွီးထံ အခစားဝငျဖို့ကတော့ အဆငျ့ဆငျ့ခှငျ့ပွုခကျြတှတေောငျးရမှာပါ။ သို့ပမေယျ့ လှယျကူမညျမထငျပါ။
အမှနျတကယျလှတျငွိမျးခှငျ့ရရငျတောငျ ဒီအခြိနျ ထိုငျးနိုငျငံတှငျသာမက တဈကမ်ဘာလုံးခကျြခငျြး သတငျးပွနျ့သှားမှာဖွဈပါတယျ။ဘုရငျ့နနျးတှငျးက တရားဝငျသတငျးပွနျကွားရေးဌာနက စာထှကျလာမှာဖွဈသလို ထိုငျးမှာရှိတဲ့ မွနျမာသံရုံးက ဒီသတငျးကို အရငျဆုံးရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဝငျးနဲ့ ဇျောအတှကျ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြက ထိုငျးဘုရငျမငျးမွတျကွီး အပျေါမှာ မူတညျနပေါပွီ၊ သညျ့အတှကျ ဒေါသတှရှေမေ့ထားကွဖို့၊ ဆန်ဒပွတာတှမေလုပျကွဖို့လိုပါတယျ။
နိုငျငံတျောအဆငျ့က ဆောငျရှကျနိုငျအောငျ တိုကျတှနျးနိုးဆျောပေးဖို့ပဲလိုပါတယျ။ ပွညျသူတှကေတော့ ဆုတောငျးပေးယုံပဲတတျနိုငျကွပါတယျ။ထိုငျးဘုရငျမငျးမွတျကွီးကမ်ြမာပါစေ ခမျြးသာပါစဆေိုတဲ့ ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သပေးကွဖို့လိုပါတယျ။
ကနြျောတုို့ သတိထားရမှာက၊ ထုိုငျးနိုငျငံမှာ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား (၄)သနျးနီးပါး ရှိတယျဆုိုတာရယျ အရေးကွီးတာက သာမနျထျုိုငျးပွညျသူအမြားစုဟာလညျး လိပျကြှနျးလူသတျမူ့နဲ့ ပတျသကျပွီး သူတုို့ ကုိုယျတုိုငျမကနြေပျကွပါဘူး။
ထုိုငျးလူမြိူးတှရေဲ့ထောကျခံမူ့ (မတ်ေတာ) နဲ့ ထုိုငျးဘုရငျမငျးမွတျကွီးရဲ့ သနားကငျြနာလိုစိတျ၊ (မတ်ေတာ) ကို ရဖုို့သာနညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့ ဆောငျရှကျသငျ့ပါတယျ။
ထိုငျးရောကျမွနျမာလုပျသားတှကေို ကြှနျတျောအထူးမှာကွားခငျြတာကတော့ ခုလိုအခြိနျမြိုးမှာ စိတျဆိုးဒေါသထှကျပွီး ထိုငျးနိငျငံကို စျောကားတဲ့ အရေးအသားတှေ ဆဲဆိုတာတှထေိုငျးဘုရငျ့မြိုးနှယျနဲ့ ပကျသကျပွီး ထိပါးရေးသားတာတှကေို လုံးဝ မပွုလုပျကွဖို့အထူးသတိပေးခငျြပါတယျ။
မိမိက ထိုငျးနိငျငံအတှငျးမှာ နထေိုငျလုပျကိုငျနကွေတာဖွဈတဲ့အတှကျ ထိုငျးဥပဒကေိုလေးစားလိုကျနာပွီး လုံခွုံဘေးကငျးစှာနဲ့ နထေိုငျအလုပျလုပျကွပါလို့ တိုကျတှနျးအပျပါသညျ။
ကြှနျတေျာ့ထံကို ဖုနျးဆကျမေး CB ကမေးနကွေသူတှေ ကနြေပျနိငျကွပါစေ။
ရဲမငျး(AAC မဟာမိတျအဖှဲ့ ) ထိုငျးမွနျမာ အခွစေိုကျ ” ဆိုပွီးရေးသားထားပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး သတငျးအမှနျကို ခငျြ့ခြိနျယုံနိုငျကွပါစေ
မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို ​ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော….အရင်​က​တော့ အဖွားက ​အော်​​ပေးတာပါ
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရမှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ကျောင်းကားအစီး( ၆၀) လှူဒါန်း
နိုက်ကလပ်နှင့် ကေတီဗွီများ ပိတ်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ညွှန်ကြား ….
ကိုယျ့အိမျမှာ အသကျ ၆၀ နဲ့အထကျ လူကွီးတှရှေိရငျ ဒါလေးသိထားပါ ….
ထိုင်းနိင်ငံသို့ လုပ်သားစေလွှတ်ခြင်းကို ပိတ်လိုက်ပါပြီ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအတွက် စံပြဈေး ကားမှတ်တိုင်အနီးက လက်ဆေးဘေစင် (၂)ခု …..